नोभल कोरोना भाइरस भनेको के हो?
नोभल कोरोना भाइरस भनेको के हो? के मानिसमा जनावरहरूबाट नोभल कोरोना भाइरस संक्रमित हुन सक्दछ? के नोभल कोरोना भाइरस र SARS एउटै हुन्? मानिस कसरी यो भाइरसबाट संक्रमित हुन सक्छ ? के यो एक व्यक्त्तिबाट अर्को व्यक्त्ति सर्न सक्दछ? यस भाइरसको संक्रमणबाट कसरी बच्न सकिन्छ?
पहिलो पाइला नेपाल सुन्दरहरैँचा शाखाद्वरा नगर स्तरीय वक्तृत्वकला सम्पन्न
खोटाङको एउटै वडामा २ करोड वढी मूल्य वरावरको साँढे सात हजार क्वीन्टल आलु उत्पादन
विषाक्त जङ्गली च्याउ खाएका झापाका परिवारै अस्पताल भर्ना अवस्था गम्भीर
आङ पासाङ शेर्पाको व्यक्तिगत लगानीमा बन्यो दुईवटा पुल
च्याउ खाँदा आमाको मृत्यु, छोरोको अवस्था भने गम्भिर
पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरकुमार नेम्वाङको निधन भएको छ।
गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुले शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘१०० कडा १०’ हेरेका छन् । भ्रष्टाचार विरुद्धको कथामा आधारित चलचित्रलाई मंगलबार यहाँका सांसदहरु राजीव पहारी, मित्रकुमारी सुवेदी गुरुङ, मिना गुरुङले हेरेका हुन् ।
सुकुना बहुमुखी क्याम्पस सुन्दरहरैँचा मोरङमा खुला रक्तदान कार्यक्रम हुने भएको छ ।अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र बिद्यार्थी युनियन(अनेरास्ववियु) क्याम्पस कमिटि सुकुना बहुमुखी क्याम्पसको आयोजनामा उक्त कार्यक्रम यहि माघ २२ गते मङगलबार हुन लागेको हो